Tatỳ aoriana dia niteny tamin’i Mosesy i Jehovah hoe: ‘Miakara atỳ amiko atỳ an-tendrombohitra. Izaho dia hanome anao vato fisaka roa izay nanoratako ireo lalàna tiako hotandreman’ny vahoaka.’ Koa dia niakatra indray tany an-tendrombohitra i Mosesy. Nijanona tany nandritra ny 40 andro sy 40 alina izy.
Nanome lalàna maro dia maro ho an’ny vahoakany Andriamanitra. Nataon’i Mosesy an-tsoratra ireny lalàna ireny. Nomen’Andriamanitra an’i Mosesy koa ny vato fisaka roa. Andriamanitra mihitsy no nanoratra teo amin’ireo ny lalàna folo izay noteneniny tamin’ny vahoaka rehetra. Antsoina hoe ny Didy Folo izy ireo.
Hizara Hizara Omen’i Jehovah ny Lalàny
my tant. 35